महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर - समय-समाचार
महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर
समय-समाचार सोमबार, २०७६ चैत्र २४ गते, ०७:०४ मा प्रकाशित
२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त भएका छन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
त्यो संगै नयाँ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
गभर्नर नियुक्त अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनीसंग राष्ट्र बैंकमा ३ दशक काम गरेको अनुभव छ ।
अनलाइन खबर लेख्छ, ‘उनी यसअघि डा. चिरञ्जीवि नेपालसँगै गभर्नरमा सिफारिस भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनलाई सिफारिस गरे पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।’